काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएकोलगायत आरोपमा निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सफाइ पाए पनि अर्का डेपुटी गभर्नरमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले व्यापक रूपमा अनुसन्धान थालेको छ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीमाथि केही दिनयता सीआईबीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ ।
करिब दुई हप्ताअघि सीआईबीको टोली डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीमाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो । सीआईबीको टोलीले डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको कार्यकक्षमा खानतलासी गर्नुका साथै उनीसँग बयानसमेत लिएको थियो । बयानका क्रममा चित्त नबुझेपछि सीआईबी टोलीले सिवाकोटीसँग लिखित स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो ।
सीआईबी टोलीले राष्ट्र बैंकमै पुगेर डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीमाथि बयान लिँदा उनले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । यही चैतमा पदावधि सकिन लागेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल विदेशमा रहेका बेला सिवाकोटीमाथि सीआईबीले छानबिन थालेको हो । सीआईबीले लिखित स्पष्टीकरण सोधेपछि डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले गएको बिहीबार बैंकका सबै विभागसँग स्पष्टीकरणका लागि लिखित जवाफ माग गरेका थिए । सबै विभागीय प्रमुखले अत्यन्तै गोप्य रूपमा लिखित जवाफ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीलाई गएको आइतबार नै बुझाएका थिए । सोही आधारमा सिवाकोटीले सीआईबीसमक्ष लिखित स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएकोलगायत विषयमा केही महिनापूर्व अर्का डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेपछि सिवाकोटीमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको थियो । तर, सफाइ पाएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ मुछिएको विषयमा सिवाकोटीको पनि संलग्नता रहेको हुँदा एउटा डेपुटीमाथि मात्रै किन छानबिन र निलम्बन ? भन्ने प्रश्न पनि तत्कालीन समयमा उठेको थियो । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी पनि कतिपय सवालमा चुकेका हुँदा अहिले सीआईबीले उनीमाथि छानबिनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको बुझिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीमाथि सीआईबीले छानबिन तीव्र बनाएपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सिफारिस पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । नयाँ गभर्नरका लागि अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने चलन रहेको छ । तीनजनामध्ये एकजना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सिवाकोटीमाथि छानबिन सुरु भएको र अर्का डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले निलम्बनमा परेर केही समयअघि मात्रै सफाइ पाएको हुँदा कसको नाम सिफारिस हुने हो भन्नेमा अन्योल देखा परेको छ ।